Vondrona Mapar Manao ririnin-dasa tsy tsaroana
Mimenomenona ny vondrona politika MAPAR ankehitriny manoloana ny fanenjehana ny naman�izy ireo. Ventesina ny hoe tsy rariny ?
Aiza ny fanajana ny zon’olombelona ? Ambara mihitsy aza fa mitsipaka ny fampihavanam-pirenena ny fanagadrana an’i Augustin Andriamananoro. Ny antenimiera rahateo vao avy nandany ny volavolan-dalàna momba ny fampihavanam-pirenena saingy fihetsika tsy mitondra fitoniana no ataon’ny fanjakana. Raha tsiahivina anefa ny tantara dia i Andry Rajoelina mihitsy no nitsipaka voalohany ny fampihavanam-pirenena notarihin’ny FFKM ny volana martsa 2015, ka nisintahan’ny tenany sy ny Pr Zafy Albert, ary tsy nanaovany sonia ilay fehin-kevitra 19 pejy nivoaka tamin’izany fotoana izany. Ny fanjakana tetezamita no tena nampiasa ny « Emmo reg » tamin’ny fanaovana haza lambo sy fisamborana ary fanagadrana olona maro, toy ny mpanao politika sy ny mpanao gazety, ka nampalaza ilay jeneraly nantsoin’ny amiraly Didier Ratsiraka hoe « Jeneraly baomba ». Firy ny ain’olona maty teto nandritra ny krizy politika nentin’ny fanonganam-panjakana 2009 ? Firifiry ny olona rava fananana sy very asa ? Tsy hoe faly na manamaivana ny fahavoazan’ny hafa fa tsy misy dikany ny fanenjehana mahazo azy ireo ankehitriny mitaha amin’ny nampizakainy ireo tsy nitovy hevitra taminy sy ny vahoaka mihitsy aza. Toa tsy takatry ny sain’izy ireo anefa izany, fa manao ririnin-dasa tsy tsaroana izy ireo ka ny fahavoazany ihany no dridradridrainy. Zatra nanao ampihimamba sy nanjakazaka ka very fihinanana, ary miantso vonjy fatratra rehefa mba voahenjika kely.